माधव-झलनाथ तिर लागेका २७ सांसदको पद गयो, ओलीले दिए अहिलेसम्म कै कडा दण्ड ! (भिडियो) – Halkhabar kura
८ बैशाख २०७८, बुधबार ०९:२६
माधव-झलनाथ तिर लागेका २७ सांसदको पद गयो, ओलीले दिए अहिलेसम्म कै कडा दण्ड ! (भिडियो)
एमालेभित्रको लडाइँ थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टीका २७ प्रतिनिधिसभा सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव नेपाल पक्ष थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रसको राजनीतिले एमाले भित्र भइचालो गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधव पक्षसंग थप आक्रामक बनेको छ । कर्णाली जस्तै स्थिति प्रतिनिसिधसभामा पनि देखिने डरले ओलीले माधव पक्षका सांसदहरुलाई भट्टाभट कारवाही गर्ने, निलम्बन गर्ने र आफू सुरक्षित हुने बाटो अख्तियार गरेका छन् ।
मंगलबार मात्रै ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माधव पक्षका २७ जना सांसदलाई तपाईलाई सांसद पदबाट किन निलम्बन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जवाफका आधारमा उनीहरुलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने ओलीको तयारी देखिन्छ । एउटै पार्टीभित्र रहेर माधव पक्षका सासंदहरुले फरक पार्टीको अभ्यास गरेको ओली पक्षको दावी छ ।
Previous यसरी आफ्नै तारिफको पुल बनाउँछन् प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित)